China Kudzokorora kurongedza muchina MSW450 Kugadzira uye Fekitori | Yuanhengtong
Textile michini zvikamu
Machining nzvimbo nc zvikamu
Mugodhi machine zvikamu
Cnc machine kushandisa michina pamusoro non-mureza zvikamu
Cnc machine zvikamu CNC machine kushandisa-non-standar ...
Cnc machine machina zvikamu zveavo vese accessories
Yakasiyana-siyana yakagadzirirwa kutendeuka zvikamu
Kudzoreredza kurongedza muchina MSW450
Makuriro ekushandisa Anonyanya kukodzera panopisa poto base, wolfberry uye imwe tireyi ine mhando dzese dzakasimba chimiro zvakajairwa zvinhu. Anoshanda maficha 1. Mukana unofambiswa nematemo matatu uye unodzorwa neinofamba controller. Iko kusanganiswa kwakakwana kwevaviri kunoita muchina nekukwirisa kwepamusoro, kudzikama kwepamusoro uye kugona kushanda. 2. Izvo zvikamu zvakakosha zvemuchina zvakagadzirwa nesimbi isina simbi, kusangana nezvinodiwa zvehutano zvechikafu QS (rezinesi rekugadzira) GMP (kuputira zvinodhaka); 3. Kudzokorora ...
Inonyanya kukodzera poto inopisa, wolfberry uye imwe tireyi ine ese marudzi echimiro chakasimba zvinhu zvakajairwa.
1. Mukana unotyairwa nematemo matatu uye unodzorwa necontroller. Iko kusanganiswa kwakakwana kwevaviri kunoita muchina nekukwirisa kwepamusoro, kudzikama kwepamusoro uye kugona kushanda.
2. Izvo zvikamu zvakakosha zvemuchina zvakagadzirwa nesimbi isina simbi, kusangana nezvinodiwa zvehutano zvechikafu QS (rezinesi rekugadzira) GMP (kuputira zvinodhaka);
3. Kudzoreredza kufamba kunogamuchirwa kune yekupedzisira chisimbiso. Yakareba nguva yekuisa chisimbiso, iyo yekuisa mucherechedzo yakanyanya kunaka;
4. Chisimbiso chakamira chinopiswa nekupisa chaiko, uye chisimbiso chakamira chinozovhurwa pacharo kana muchina ukavharwa kuti usa ironing iyo firimu kana muchina wavharwa;
5. Iyo murume-muchina interface inotora ruvara rwekubata skrini, zvichigonesa mushandisi kushandisa muchina zvakajeka uye nekushandura iyo interface zvakasununguka, zvichiita kuti mashandiro acho awedzere;
6. Pane iyo yekubata skrini, iyo yekudyisa chinzvimbo chekudyisa michina inogona kuchinjwa uye kugadziridzwa (kumberi nekumashure unit mm);
7. otomatiki bhegi kuyerwa kuyerwa kunogona kuitika nekiyi imwe pane yekubata skrini.
8.Dhijitari photoelectric yekuonekwa uye mbiri-nzira yekuteedzera inogona kunyatso bvisa kupakata kukanganisa (± 1mm) uye kudzivirira zvinhu zvemarara.
Hwakagadzwa muna 2012, Qingdao Yuanhengtong Machinery Co., Ltd. unyanzvi muna R & D uye kugadzira asiri non-mureza midziyo, uye tsika-akaita zvakatipoteredza noushamwari michina kuti otomatiki kugadzirwa mitsetse.
Zvisiri-zvakajairwa zvikamu kutema, kunyatsoita simbi zvikamu, zvemuchina zvikamu, isina simbi machine, isina simbi zvikamu kugadzira, zvemagetsi zvikamu kugadzirisa uye kugadzira. Izvo zvigadzirwa zvinopfuura 1000 marudzi. Izvo zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana senge zvishandiso, kutaurirana, michina michina, auto zvikamu, nezvimwewo Iyo mhando yechigadzirwa iri munzvimbo inotungamira pakati pevamwe vekumba.
Firimu upamhi 450mm
Kureba kwebhegi 70-350mm
Hupamhi hweBhegi <180mm
Gadzira Ctheight <100mm
Fim Roll Dhayamita ≤320mm
Kavha Rate 20-120bag / min
Simba \_ 380V, 50 / 60Hz,
Kavha OPP / Pe, PT / PE, PAPER / PE, BOPP / Pe
Saizi yeMuchina 4800 × (W) 1060X (H) 1500
Gross Kurema 1200KG
Pashure: Kaviri frequency kutendeuka mutsago kurongedza muchina
Zvadaro: Zvikamu zvakakosha zvezvikwiriso zvakaumbwa zvakaenzana-zvakaumbwa uye nzungu
MSFT Horizontal otomatiki sub inotakura
Yakazara otomatiki Multifunctional Packaging Machine
MSZH otomatiki katoni muchina
Horizontal otomatiki tireyi mugoveri
Otomatiki chingwa kurongedza muchina
Kudzoreredza kurongedza muchina MSW650
Zvigadzirwa Nhungamiro - Zvinowanikwa Zvigadzirwa - Hot Tags - Sitemap.xml - AMP Mobile